Download လုပ်ထားသောဖိုင်တွဲကိုကျွန်တော်ဖျက်လိုက်လျှင်၎င်း ငါက Mac ပါ
အင်တာနက်မှမည်သည့်ဖိုင်ကိုမဆို download လုပ်သောအခါ၊ အကြောင်းအရာအားလုံးသည်ဖြစ်သည်Downloads ဖိုင်တွဲတွင်တိုက်ရိုက်သိမ်းဆည်းထားသည်၎င်းသည်ပြန်လည်အသုံးချနိုင်သောဘင်၏ဘေးတွင်ရှိသော Dock မှတိုက်ရိုက်ရယူနိုင်သောဖိုဒါတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖိုင်တွဲကိုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းထားရှိခြင်းဖြင့် downloaded files များကိုရှာဖွေသည့် Finder ကိုရှာဖွေရန် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ desktop တွင်ဖိုင်များမည်မျှဖြည့်နေသည်ကိုကြည့်ရန်မလိုအပ်ပါ။ downloads ဖိုင်တွဲကိုမတော်တဆဖျက်မိလျှင်ကော။ Finder မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုရယူနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အဆင့်တစ်ခုထက်ပိုပြီးလုပ်ရန်လိုအပ်သည် ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းလက်ငင်းဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဒီသေးငယ်တဲ့ပြproblemနာဟာအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်ရှိပါတယ်။ ဤဖြေရှင်းချက်သည် Dock ထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းလိုချင်သောမည်သည့်ဖိုင်တွဲကိုမဆိုတည်ရှိနိုင်ပြီးပျော်ရွှင်သော Finder ကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်အတူတူပင် directory တစ်ခုတည်းကိုအမြဲတမ်း ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ Downloads ဖိုင်တွဲကို Dock ထဲပြန်ထည့်ရန်အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်ရမည်။
Dock ရှိ Downloads ဖိုင်တွဲကိုပြန်ထားပါ
ပထမ ဦး စွာငါတို့ဖွင့်လှစ် Finder ကို
ထို့နောက်သင်သည်ထိပ် menu သို့သွားပြီး menu ကိုနှိပ်ပါ Ir။ ထို့နောက် option ကိုနှိပ်ပါ စတင်ပြုလုပ်ခြင်း.
အသုံးပြုသူမှပေးအပ်ထားသည့် system ဖိုလ်ဒါများအားလုံးကို Finder ကပြလိမ့်မည်။ Downloads ဖိုင်တွဲကိုထပ်မံပြသရန်ကျွန်ုပ်တို့မှာ s ကိုသာလိုအပ်သည်ရွေးပြီး Dock သို့ဆွဲယူပါအထူးသဖြင့်ယခင်ကရှိရာtoရိယာရန်။
ဒီစစ်ဆင်ရေးကိုပြီးတာနဲ့ငါတို့ဘယ်လိုမြင်ကြမလဲ ဒေါင်းလုပ်ဖိုင်တွဲပြန်ပေါ်လာသည် မူရင်းတည်နေရာ၌တည်၏။
Applications Dock တွင်မည်သည့်ဖိုလ်ဒါကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် MacOS ကခွင့်မပြုပါ။ ထို့ကြောင့် Dock ထဲသို့ကျွန်ုပ်တို့ထည့်လိုသော Downloads ဖိုင်တွဲနှင့်အခြားဖိုင်တွဲနှစ်ခုလုံးကို၎င်း၏ညာဘက်အခြမ်းတွင်ပြထားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » Download လုပ်ထားတဲ့ဖိုင်တွဲကိုကျွန်တော်ဖျက်လိုက်ရင်ပြန်ဆယ်နည်း
အရမ်းကောင်းတယ်။ ဖိုင်တွဲကိုငါမှားယွင်းစွာဖျက်ပစ်လိုက်ပြီးအချက်အလက်ပျောက်ဆုံးသွားပြီဟုငါထင်ခဲ့သည်။ ပို့စ်ပြောသည့်အတိုင်းပြန်ထားလိုက်သည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ဒီအဆင့်တွေကိုငါလုပ်ပြီးအမှိုက်ပုံးဘေးမှာဖိုလ်ဒါထပ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ပြနာကကျွန်တော်မတော်တဆဖျက်မိခြင်းမတိုင်မီ၊ အထိုင်ပေါ်ရှိ download folder သည်လတ်တလောစာရင်းများနှင့်အတူအထက်သို့စာရင်းတစ်ခုကိုပြသခဲ့ပြီးယခုအခါ downloads အားလုံးနှင့်အဆင်ပြေစွာပြတင်းပေါက်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးပြည်နယ်မူလဖိုင်တွဲသို့ကျွန်တော်ပြန်သွားနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ မကြာသေးမီကပြုလုပ်ထားသော downloads များကိုပြန်လည်စာရင်းသွင်းရန် Mac dock ရှိဖိုလ်ဒါကိုမည်သို့ပြောင်းလဲရမည်ကိုမည်သူမဆိုသိရှိပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Camila Andrea ဟုသူကပြောသည်
camila andrea သို့ပြန်သွားပါ
Dock တွင်ရှိသည့် icon နှင့်၎င်း၏ pop-up menu တွင် "View content as" အောက်ရှိ "Fan" option ကိုရွေးချယ်ပါ။ မင်္ဂလာပါ။
ငါဖိုလ်ဒါကိုဖျက်မထားဘူး, ငါလုံးဝမှတ်မိဘူး။ ငါရိုးရိုးဆိပ်မှပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ မင်းရဲ့သတင်းအချက်အလက်နဲ့အတူငါအဲဒါကို ၀ င်ကြည့်ပြီးအရင်ကရှိခဲ့တဲ့နေရာမှာထားလိုက်တယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ပါပလော QM ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! ငါမတော်တဆဖျက်မိသည်နှင့်ယခုသင်၏ရှင်းပြချက်နှင့်အတူငါနောက်တဖန် Dock မှာ download icon ကိုနေရာချထားနိုင်!
Pablo QM ကိုစာပြန်ပါ
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! ငါပြanyနာမရှိဘဲ Catalina မှာလုပ်ခဲ့တယ် ... 2020ပြီလ XNUMX
ငါလွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemနာတစ်ခုရှိသည်။ ယခုဖိုင်တွဲများသည်အက္ခရာစဉ်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲသက္ကရာဇ်စဉ်အရမဟုတ်ပါ။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုကောင်းစွာမစွမ်းဆောင်နိုင်သလော သူတို့ကိုငါဘယ်လိုပြန်စီရမလဲ
မှားယွင်းစွာကျွန်ုပ် folder ကိုဖျက်လိုက်ပြီး Dock ထဲပြန်ထည့်လိုက်သည်၊ သို့သော်ငါကထိုအရာကိုပြန်လည်အစပျိုးခြင်းမပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုရှာရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Download ဖိုင်တွဲပေါ်သို့ mouse ကိုတင်ပြီးညာဘက်ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။ အဲဒီမှာမတူညီတဲ့ display options တွေကိုပြပြီး Fan mode ကိုသင်ရွေးနိုင်သည်။
ကောင်းပြီအရိပ်အမြွက်, ငါပြုပြီးပြီနှင့် Download folder ကို Dock တွင်ထင်ရှား။ ,
လက်ထပ် Ernesto Alonso Garcia ဟုသူကပြောသည်
ernesto alonso garcia casado အားပြန်ကြားပါ
AI မှအဖြူနှင့်အဖြူဓာတ်ပုံများကိုအရောင်တင်ရန် Adobe က Scribbler စီမံကိန်းကိုတင်ပြသည်
Beat The Game သည်ယနေ့ Mac App Store သို့ရောက်ရှိသည်